News Archives - 7DAY THADIN
မန္းတေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးတြင္ ကေလးခိုးသြားပါသျဖင့္ ေတြ႕လွ်င္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ေပးပါရန္
ယနေ့18.4.2022 နေ့လည်၁၂ဝန်းကျင်လောက်က မန်းတလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတွင် ကလေးခိုးသွားပါသဖြင့် တွေ့လျှင်အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည် အသက် 3နှစ်လောက်ဘဲရှိပါအုံးမည် 09-784747860 09-759884755 သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် ကလေးအား ခိုးသွားသောသူများ ကလေးခိုးသွားသောသူများ ကလေးအား ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကလေးအားပြန်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခဗျ။ Hein Htet Zaw Zawgyi ယေန႔18.4.2022 ေန႔လည္၁၂ဝန္းက်င္ေလာက္က မန္းတေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးတြင္ ကေလးခိုးသြားပါသျဖင့္ ေတြ႕လွ်င္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္ အသက္ 3ႏွစ္ေလာက္ဘဲရွိပါအုံးမည္ …
မန္းတေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးတြင္ ကေလးခိုးသြားပါသျဖင့္ ေတြ႕လွ်င္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ေပးပါရန္ Read More
၀က္ဝံ ေလးမ်ားရဲ႕သခင္ ကြယ္လြန္သူ ကိုေအာင္၏ က်န္‌‌ေနေသာ ၀က္ဝံေလးမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္သို႔ လႈဒါန္း
၀က်ဝံ လေးများရဲ့သခင် ကွယ်လွန်သူ ကိုအောင်၏ ကျန်‌‌နေသော ၀က်ဝံလေးများအား နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လှုဒါန်း လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းက ၀က်ဝံကုတ်ခံရ၍ သေဆုံးခဲ့သော ဦးကိုကိုအောင်၏သတင်းမှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာအ‌ပါ်တွင် တိချစ်သူများ အကြားအလွန် နာမည်ကြီးခဲ့ပါသည်။ လူတချို့မှာလည်း သခင်ဖြစ်သူဘက်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို သေဆုံးသွား သော ၀က်ဝံလေးများကို သနားနေသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ယခုအခါ ကျန်ရှိနေသော အိစိကွေးတို့၏ သူငယ်ချင်း၀က်ဝံများကို တောထဲသို့ …
၀က္ဝံ ေလးမ်ားရဲ႕သခင္ ကြယ္လြန္သူ ကိုေအာင္၏ က်န္‌‌ေနေသာ ၀က္ဝံေလးမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္သို႔ လႈဒါန္း Read More
“ဆီေစ်းႀကီးလို႔ လွ်ပ္စစ္ကား စိတ္ဝင္စားပါတယ္ဆိုမွ. . . အားသြင္းဖို႔ မီးစက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း ဖတ္ၾကည့္ပါဦး”
Unicode မြန်မာ့ ပထမဆုံး မီးစက်ပါ လျှပ်စစ်ကားက ဂျင်းကားလား.. အခုတလောလူပြောများနေတဲ့ ‌ရွှေပြည်သာသာဓုကန်တယ်စလာလေးအကြောင်းကို ကျနော်သိသလောက်လေး ပြောပြပေးမယ်။ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်က ကျနော်သဘောကျခဲ့ဖူးလို့ လေ့လာဖူးတာလေးပါ။ ခိုင်ခိုင်းဆန်းဒါးဟာ၂၀၁၈ လောက်ကတည်းကသတင်းစာတွေတော်တော်များများထဲမှာတောင် ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာဘတ်ထရီကားဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့ဖူးပါတယ်. ကျနော်လည်းအဲ့လောက်တည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ လောက်မှာသာဓုကန်စက်ရုံမှာစတင်ပြီး ရောင်းချခဲ့တယ်။ အစီးရေ ၅၀၀ ပဲထုတ်မှာဘာညာနဲ့ လျှောက်ကြော်ငြာခဲ့ပေမယ့် ကျနော်သိရတာ ၅ စီးတောင် ပြည့်မယ်မထင်ဘူး။ တကယ်ဝယ်စီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ …
“ဆီေစ်းႀကီးလို႔ လွ်ပ္စစ္ကား စိတ္ဝင္စားပါတယ္ဆိုမွ. . . အားသြင္းဖို႔ မီးစက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ကားအေၾကာင္း ဖတ္ၾကည့္ပါဦး” Read More
ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ေမြးျမဴခဲ့သည့္ ဝက္ဝံကအ႐ိုင္းစိတ္ဝင္ၿပီးကိုက္သတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး
တောင်ငူမြို့တွင် ငယ်စဉ်ကပင်မွေးမြူခဲ့သည့် ဝက်ဝံကိုက်သတ်မှုကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး ပဲခူးတိုင်း၊တောင်ငူမြို့နေ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူများအကြားထင်ရှားသည့် အနှိုင်းမဲ့အကြင်နာပရဟိတ ဦးကိုကိုအောင်သည် ဧပြီ ၇ ရက်(ယနေ့)နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်က ၎င်းမွေးမြူခဲ့သည့် ဝက်ဝံနှစ်ကောင်မှ ကိုက်သတ်ခဲ့သဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်ဟု တောင်ငူနာရေးကူညီမှုအသင်းမှသိရသည်။ သေဆုံးခဲ့သည့်ဦးကိုကိုအောင်သည် တောင်ငူမြို့၌ မြင့်မိုရ်နန်းတည်းခိုခန်းနှင့် KTV ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကာ ဝက်ဝံနှစ်ကောင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များစွာအား အနှိုင်းမဲ့အကြင်နာပရဟိတ အမည်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ဦးကိုကိုအောင်အား ၎င်းမွေးမြူထားသည့် ဝက်ဝံနှစ်ကောင်ဖြစ်သော …
ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ေမြးျမဴခဲ့သည့္ ဝက္ဝံကအ႐ိုင္းစိတ္ဝင္ၿပီးကိုက္သတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး Read More
ကားေပၚကို ဆန္အိတ္ေတြ တင္လာၿပီး ဆန္လိမ္ေရာင္းတဲ့ လိမ္နည္းအသစ္
မေမြို့က လူတွေ သတိထားကြပါနော် ။ရွှေဘိုကနေ လာတာဆိုပြီး ပွဲရုံကနေ ဆို အကြွေးပေးရလို့ သူတို့က စိုက်ပျိုးချိန်မို့ ငွေလိုလို့ ဆိုပြီး ကားနဲ့ ဆန်တွေ လိုက် ရောင်းတာပါ။ အူလည်လည် ပုံစံနဲ့ ဗိုက်ကလဲ အရမ်းဆာနေပီ လမ်းတွေလဲ မသိဘူးဆိုပြီး သနားစရာလုပ်ပြတော့ ကျမမှာ အိမ်စားဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ3ပွဲတောင် အလကား …
ကားေပၚကို ဆန္အိတ္ေတြ တင္လာၿပီး ဆန္လိမ္ေရာင္းတဲ့ လိမ္နည္းအသစ္ Read More
ရန္ကုန္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီလူကိုေတြ႕ရင္ ခပ္ေဝးေဝးက ေရွာင္သြားၾကပါ (က်မ ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပါ)
ကျမ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူမြင်ကွင်းမှာ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်က သံလမ်းမှတ်တိုင်၊ မူကြိုကျောင်းရှေ့က လမ်းသွယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ကားလမ်းကူးပြီးလို့ တဖက်ကို ရောက်ရောက်ချင်း အနားက အမည်မသိယောကျ်ားတစ်ယောက်က ကားလမ်းပေါ် အရှိန်နဲ့တွန်းပစ်လှဲချပါတယ်။ အရှိန်နဲ့လဲသွားပြီး ဒဏ်ရာရချိန်မှာ လက်ထဲက ထီးကို ဆွဲလုတယ်။ ထီးရွက်နေရာကို ရိုက်ချိုးလိုက်ပြီး အဲ့ထီးချွန်နဲ့ ကျမကို ဒေါသတကြီး စရိုက်ပါတော့တယ်။ …
ရန္ကုန္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီလူကိုေတြ႕ရင္ ခပ္ေဝးေဝးက ေရွာင္သြားၾကပါ (က်မ ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပါ) Read More
အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက် (၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၂:၃၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) (က) အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်အခြေအနေ (၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၁:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်(Deep Depression)သည် မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကို ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့အနီးမှ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ (၂) အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်(Deep Depression)၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကို ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့အနီးမှ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါသဖြင့် အညိုရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ …
အားေကာင္းေသာမုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ Read More
အာစနီဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ ယေန႔ ၁နာရီ ခန႔္မွန္းခ်က္ထုတ္ျပန္။
အာစနီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင် ယနေ့ ၁နာရီ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်။ မြန်မာကပ္ပလီပင်လယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော 91B Deperssoin မုန်တိုင်းငယ်သည် မတ်၂၀ရက်နေ့ နေ့လယ်၁နာရီတွင် ၁နာရီ ၃၅မိုင်နူန်းနဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်မြောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ရွေ့သွားနေပြီနောက် ၁၆နာရီတွင်း မတ်၂၁ရက်နေ့ အစောပိုင်း အာစနီဆိုင်ကလုန်းဖြစ်ပြီ မတ်၂၁ရက္နေ့လယ်၁၂နောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း အနောက်ဘက် မြစ်ဝကျွန်းဒေသ မော်တင်စွန်း ၁နာရီ ၂၅ …
အာစနီဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ ယေန႔ ၁နာရီ ခန႔္မွန္းခ်က္ထုတ္ျပန္။ Read More
မုန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက်အမှတ်စဉ်(၀၄/၂၀၂၂) (၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၀)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၉:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) (က) မုန်တိုင်းငယ်အခြေအနေ (၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၇:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ်(Depression)သည် မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင်(၂၁၀)မိုင်ခန့်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့၏တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင်(၃၃၀)မိုင်ခန့်၊ ထားဝယ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင်(၃၇၀)မိုင်ခန့်၊ ကော့သောင်းမြို့၏ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင်(၃၃၀)မိုင်ခန့်၊ ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် …
မုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ Read More
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျမန္မာထံ ေရာက္လာႏိုင္
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာထံ ရောက်လာနိုင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာတဲ့ အခြေအနေကြောင့် မုန်းတိုင်းငယ်မှ တစ်ဆင့် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအဖြစ် ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သိရပါတယ်။ မိုးဇလရဲ့ ဒီကနေ့ မတ် ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီခွဲ အချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ အီကွေတာအနီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအရှေ့ပိုင်းမှာ …
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျမန္မာထံ ေရာက္လာႏိုင္ Read More